साउन मेहन्दीको मौसम हो - प्रश्नोत्तर - प्रकाशितः श्रावण ३, २०७३ - नारी
साउन मेहन्दीको मौसम हो
श्रावण ३, २०७३
ओमप्रकाश शाह , न्यू मुम्बई ट्रेनिङ सेन्टर, बागबजार
नेपाली बजारमा मेहन्दी लगाउने चलन कस्तो छ ?
मेहन्दी लगाउने चलनमा परिवर्तन आएको छ । साउन महिनालाई त मेहन्दीकै मौसम भने पनि फरक पर्दैन । पहिले पारम्परिक हिसाबमा मेहन्दी लगाइन्थ्यो भने अहिले यसले फेसनको रूप लिएको छ । विवाहमा पनि यसलाई शृंगारका रूपमा लिइन्छ ।
साउन महिना तथा विवाहमा लगाइने मेहन्दीको डिजाइनमा के–कस्तो फरक हुन्छ ?
विवाहमा महिलाहरू हातखुट्टा तथा पाखुरासम्मलाई प्राथमिकता दिन्छन् । यसको डिजाइनमा पनि विवाहको महत्व झल्काइन्छ तर साउनमा भने हत्केला र खुट्टामा बढी मेहन्दी लगाइन्छ । यसमा धेरैले प्राकृतिक डिजाइन मन पराउँछन् ।
अहिले के–कस्तो शैली लोकप्रिय छ ?
अहिले मेहन्दी लगाउने क्रमले निकै व्यापकता पाएको छ । यसलाई शुभको प्रतीक मानिन्छ । त्यसैले विभिन्न शुभ समयमा मेहन्दी लगाउने चलन बढेको हो । साउन महिनामा रुचिअनुसार रिसर्व, कोहिनुर, मारवाडी, राजस्थानी आदि कलात्मक शैलीको माग बढी हुन्छ ।
फेन्सी मेहन्दीमा के–कस्ता मेहन्दी उपलब्ध छन् ?
अहिले मेहन्दी फेसनको पर्याय भएकाले अन्य विधामा झंै यसमा पनि निकै प्रयोग भैरहेको छ । विभिन्न मेहन्दी प्रतियोगिता तथा फेसन शोमा पनि यसको विविध शैली प्रयोग भएको छ । अहिले नेपाली बजारमा मेटालिक फेब्रिक वा गोल्डेन मेहन्दी पनि लगाइन्छ ।
मेहन्दीका सकारात्मक पक्ष के–के छन् ?
मेहन्दी हात रंगाउन मात्र होइन औषधीय गुणका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ । यसलाई टाउको दुख्दा वा कतै घाउ हुँदा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
भाद्र १२, २०७३ - मेहन्दीको क्रेज, महत्व तथा सावधानी
श्रावण २६, २०७३ - गर्मीमा हरियो तरकारी
श्रावण ९, २०७३ - वर्षा अर्थात् रमाइलो मौसम
असार ३१, २०७३ - साउन महिनाको राशिफल
वित्तीय क्षेत्रमा महिला आकर्षण पुस २५, २०७८
व्यवसाय गर्दा मेहनत र धैर्य जरुरी पुस ११, २०७८
परफ्युमको छनोट कसरी गर्ने ? पुस ४, २०७८
आर्थिक सबलीकरणले महिला सशक्त मंसिर १६, २०७८
‘सन्तुलन मिलाएर खाए तेलले फाइदा गर्छ’ मंसिर ९, २०७८